कोभिड उपचार क्षमता बढाउँदै टिचिङ अस्पताल :: विवेक राई :: Setopati
कोभिड उपचार क्षमता बढाउँदै टिचिङ अस्पताल
राज्यले सहयोग गरोस्, हामी थप उपचारको व्यवस्था गर्छौं: निर्देशक काफ्ले
अहिले धेरै अस्पतालहरूलाई कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न सकस छ। सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका कारण अस्पताललाई संक्रमित व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।
अहिले भनेको बेला संक्रमितले बेड पाउने अवस्था छैन। झन् आइसियू चाहिने जटिल संक्रमितका लागि बेड पाउन मुस्किल छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका छन्। खटाइकै क्रममा कति स्वास्थ्यकर्मीहरू आफैं संक्रमित भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा हाम्रा अस्पतालले कसरी काम गरिरहेका छन्? उनीहरूले आफ्नै स्रोत र साधनको कसरी अधिकतम उपयोग गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई राज्यबाट थप के सहयोग चाहिन्छ? यसबारे बुझ्न हामीले महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्तपतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेसँग कुरा गर्यौं।
डा. काफ्लेका अनुसार बुधबारसम्म टिचिङ अस्पतालमा ९० जना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमा १२ जना आइसियूमा छन्। कोभिड उपचारका लागि भनेर अहिले अस्पतालले १ सय ४० बेड छुट्याएको छ।
तर संक्रमितको चाप अनुसार अहिले भएक बेडले केही दिनमात्र धान्ने देखिन्छ। झन् आइसियू बेड त अहिले नै भरिएका छन्।
थप आइसियू चाहिने जटिल संक्रमितलाई बेड छैन। दिनकै आइसियू बेडको खोजीमा मानिसहरूले तारान्तर फोन गरिरहेका डा. काफ्ले बताउँछन्।
आइसियू चाहिने संक्रमितलाई बेड छैन भन्दा डा. काफ्लेको मन खिन्न हुन्छ।
उनले नेपालगञ्जबाट पनि मानिसहरूले आइसियूका लागि फोन गर्ने गरेको सुनाए।
यहीँ समस्याका कारण अस्पतालले आइसियू बेड विस्तार गर्न पनि खोजेको छ। तर बेडमात्र भएर हुन्न, जनशक्ति पनि चाहिन्छ। आवश्यक जनशक्ति नहुँदा आइसियू बेड विस्तार गर्न नसकिएको निर्देशक काफ्ले बताउँछन्।
'अहिले मुख्य समस्या भनेकै जनशक्तिको छ। अहिले भएकाहरूलाई जनशक्ति पुगेको छ तर नयाँ थप्ने भनिएको आइसियू र वार्डका लागि जनशक्ति छैन,' उनले भने, 'डेढ सय नर्स र २५ जना मेडिकल अफिसर भयो भने दुई दिनभित्रै १० बेडको आइसियू र ५० बेडको जनरल वार्ड चलाउन सक्छौं।'
१० बेड आइसियू र ५० बेडको जनरल वार्ड चलाउन सकिए टिचिङले अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको भन्दा दोब्बर संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
अहिले अस्पतालले १२ बेडको आइसियूमात्र चलाइरहेको छ। थप १० बेड आइसियू विस्तार गर्ने हो भने दैनिक २२ जना जना संक्रमितलाई आइसियूमा उपचार गर्न सकिन्छ।
अस्पतालले त्यसका लागि जोड पनि गरिरहेको छ। त्यसका लागि चाहिने नर्सहरू आन्तरिक सेवाबाट केही संख्यामा जुटाउने काम पनि भइरहेको डा. काफ्ले बताउँछन्।
उनले केही वार्डहरूलाई मर्ज गरेर त्यहाँबाट नर्सहरू जुटाउने काम भइरेहको जनाए।
अहिले उपाचररत संक्रमितलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति भने अस्पतालले जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सजिलो भने छैन।
सबै स्वास्थ्यकर्मी रातदिन खटेर काम गरिहेका छन्।
निर्देशक काफ्ले भन्छन्, 'स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेको बेला सास फेर्न पाएका छैनन्। १२ घण्टा पिपिई लगाउँदा त्यसको बाफले कस्तो बनाउँला? त्यसमाथि कति स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित हुनुहुन्छ। योबेला जसरी हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च पार्न जरूरी छ।'
चिकित्सकहरूका अनुसार आइसियूमा रहेका एक जना बिरामीका लागि एक जना नर्स चाहिन्छ। अर्थात् टिचिङमा १२ जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत छन् भने उनीहरूलाई हेर्ने पनि १२ जनै नर्स चाहिन्छ र एक जना नर्सको ड्युटी ८ घण्टाको हुन्छ। त्यो हिसाबले १२ जना संक्रमित हेर्न कम्तीमा ३६ जना नर्स आवश्यक पर्छ।
त्यस्तै, १२ जना आइसियूमा रहेका संक्रमितका लागि कम्तीमा १० जना क्रिटिकल केयर हेर्ने चिकित्सक चाहिन्छ। टिचिङले अहिलेसम्म यी दुबै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ।
टिचिङले अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको चाप बढे पनि 'नन कोभिड' सेवालाई बन्द गरेको छैन। तर कोभिडका बिरामी बढ्दै जाँदा नन-कोभिड सेवा घट्दै गएको निर्देशक काफ्लेले जनाए।
उनले अस्पतालमा अहिले शल्यक्रियालगायत सबै सेवा चलिरहेको जनाउँदै निषेधाज्ञाले गर्दा भने अब कम हुने बताए।
संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा अस्पतालले कोभिड क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताललाई ५० प्रतिशत बेड संक्रमितका लागि छुट्याउन भनेको छ।
अहिले टिचिङसँग ७ सय १५ बेड क्षमताको छ। भनेपछि टिचिङले मात्र कोभिड उपचारका लागि साढे तीन सय बढी बेड छुट्याउनुपर्छ। तर निर्देशक काफ्लेले मन्त्रालयले भनेअनुसार आधा बेड कोभिडका लागि छुट्याउनु सम्भव नहुने जनाए।
'त्यस्तो सम्भव हुँदैन। सबै बिरामीको बेडलाई कोभिड बेड बनाउनु मिल्दैन। जस्तै: जलेको बिरामी, डेलिभरी गराउने बेड र बच्चाको बेडलाई कोभिड बेड बनाउन सकिँदैन। उहाँहरूलाई पनि त उपचार गर्नुपर्यो नि,' निर्देशक काफ्लेले भने, 'अब आइसियूको हकमा पनि त्यस्तै हो। हामीसँग झन्डै ८० वटा आइसियू छन् तर सबैलाई कोभिडका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्दैन।'
उनले अहिले टिचिङलाई संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा प्रमुख समस्या नै जनशक्ति र सुरक्षा सामग्रीको रहेको जनाए।
उनले यी कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिए बेड क्षमता बढाएर थप संक्रमितको उपचार गर्न सकिने जनाए।
पछिल्लो समय बजारमा सुरक्षा कवज (पिपिई) समेत अभाव हुन थालेको भन्दै निर्देशक काफ्लेले भने, 'भेन्टिलेटरमा हालेको मान्छेलाई दुई दुई घण्टामा पल्टाइराख्नुपर्छ। हात खुट्टा चलाइराख्नुपर्छ। त्यो हुँदा दिनमा १ सय २० बढी पिपिई खर्च हुन्छ। त्यसमा खर्चको पनि कुरा छ। एउटै पिपिईको मात्र दुई हजार बढी पैसा पर्छ। भनेको पिपिईमा मात्र दैनिक लाखौं खर्च धान्नुपरेको छ।'
उनले सम्बन्धित निकायको सहयोग हुनसके थप संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन गर्न सकिने अठोट देखाए।
'सबैको सहयोग भयो भने थप गर्न सकिन्छ। राज्यले सहयोग गरोस्, हामी तयार छौं। नत्र टाउको ठोकेर हुन्न,' निर्देशक काफ्लेले भने।
कोरोनासँग लड्न टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्यो डेढ सय नर्स
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १६, २०७८, ०६:१३:००